Haysashada waxay soo bandhigeysaa biraha cusub ee loo yaqaan 'Activité Steel' Wararka IPhone
Withings waxay soo bandhigaysaa Birta cusub ee loo yaqaan 'Activité Steel'
Adduunyada tira koobyada, waxaan ka heli karnaa xulashooyin fara badan. In kasta oo badankood ay ku wajahan yihiin adduunka isboortiga oo ay leeyihiin muuqaal isboorti oo badanaa lagu soo saaro walxaha caagga ah, waxaan sidoo kale heli karnaa moodello qaab ah sida kuwa ay soo saareen Withing. Qaabka cusub ee loo yaqaan 'Activité steel steel' wuxuu ku yaalaa kalabar inta udhaxeysa Model-ka loo yaqaan 'Activité Pop' iyo nuuca ugu horeeya ee isla magaca leh ee suuqa ku dhacay sanadkii hore. Qaabkan cusub waxay na siisaa taabasho aad u qurux badan haddii aan rabno inaan adeegsanno tiro-koob 24 saacadood maalintii annagoon u ekaan inaan jijin jijin.
Haddii aad ka mid tahay isticmaaleyaasha adeegsada tirinta jijimooyin laakiin aysan jecleyn ama uusan kaliya arkin midka loo isticmaalay smartwatch, saacadaha shirkadda Faransiiska ayaa ah xalka ugu habboon. Noocyada 'Activité steel' waxay na siisaa dacwad bir ah oo wareegsan oo leh tiro-koobyada caadiga ah sida miiska tallaabada, masaafada la safray, wareegyada hurdada laakiin marka lagu daro, oo ay ugu mahadcelineyso iska caabbinta biyaha, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan hubino horumarkayaga inta aan dabbaalaneyno.
Dhammaan xogta aan ka soo saarno qalabka, mahadnaqa ku xirnaanta bluetooth 4.0, waan ka maamuli karnaa barnaamijka gaarka ah ee shirkadda loo yaqaan 'Whiting Health Mate', halkaas oo aan ka eegi karno horumarkeenna maalinlaha ah iyo kan toddobaadlaha ah. Aaladda loo yaqaan 'Activité Steel', sidaan kor ku soo sheegay, waxay ka tiro badan tahay smartwatch, markaa haddii aan rabno ogeysiis ku saabsan curcurka, kani ma ahan qalabkeenna.
Sida moodooyinkii hore, the Activité steel wuxuu na siiyaa ismaamul 8 bilood ah mahadsanid batteriga aan dib-u-soo-buuxin karin ee lagu dhisay qalabka. Muddo sidan oo kale ah, dhib nagali meyno inaan mar mar ku dhex marno dukaan saacad ah si aan u beddelno. Moodalka 'Withing' wuxuu la jaan qaadayaa iPhone 4s wixii ka dambeeya iyo nooc kasta oo la mid ah ama ka weyn iOS 7da. Noofambar 19 wuxuu suuqa ku soo gali doonaa $ 169,95.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Withings waxay soo bandhigaysaa Birta cusub ee loo yaqaan 'Activité Steel'
Dadka isticmaala IPhone 6s waxay soo sheegaan luminta fariimaha iyo wicitaanada markay soo celinayaan nuqulkii iCloud
Apple waxay ka dacweysay Shiinaha xayeysiis marin habaabin ah